Cameroon: Jean-Pierre Saah, soo saaraha muusikada iyo tartanka muusikada - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY »Cameroon: Jean-Pierre Saah, soo saaraha muusikada ee tartanka iyo muranka dhalinyarada - JeuneAfrique.com
Jean-Pierre Saah waxaa laga helay gurigiisa oo ku yaala Douala (sawir gacmeed). © Flickr / CC / Christine Vaufrey
Wuxuu sii wadi doonaa inuu xiiso u yeesho inkastoo uu geeriyooday, 31 bishii Maarso ee la soo dhaafay, ka dib weerarkii gurigiisa. Dhamaadka safarka ganacsiga weyn ee saameyn ku yeelan doona caalamka muusikada Afrika ee saddexdii sano ee la soo dhaafay.
Ma lahan bogga rasmiga ee internetka. No profile profile, no xisaabta Twitter. Sawirrada isaga ayaa naadir ah. Macluumaadka ku saabsan, waxay ku dhow yihiin kuwa aan ku jirin matoorada raadinta. Waa in noloshii Jean-Pierre Saah, wuxuu dilay 31 bishii Maarso ee la soo dhaafay da'da 65 sanowaxaa ku wareegsan qarsoodi badan. "Aad u furan uu ahaa, mid kasta helay guriga iyo had iyo jeer diyaar u ahayd inay maqlaan oo ay caawiyaan" saxo isla markiiba Bertrand Nono, walaalkiisa ka yar, Kan aqbala ku leh adeerkiis guriga marxuumka si Bonabéri, degmo ee Douala . isku mid ka mid ah ninka aan xusuusan doontaa sidii nin ganacsade ah oo ah soo saare music saameynta badan ayaa lagu dilay laba toddobaad ka hor shakhsiyaad aan la aqoonsan wali.
Halkaan ayuu ku yaalaa, tuuladaas oo leh beertii barooranaya, in qoyskiisu dego. Inta aaska, ay helaan visitors maalin kasta, gelinaya xabbadood oo ku jira meesha si ay u sameeyaan shakhsiyadda ee Jean-Pierre Saah.
Dhibaatada Tramadol ee dugsiyada ee Cameroon